संसद चल्न नदिने, तर तलब भत्ता बुझ्ने ! | Safal Khabar
संसद चल्न नदिने, तर तलब भत्ता बुझ्ने !
नैतिकता नभएपछि कसको के लाग्दो रहेछ
शुक्रबार, ३० पुस २०७८, ११ : ३१
काठमाडौं । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान, कानुन नमानेर आफुखुसी चल्न खोज्दा सत्ताच्युत हुन पुगेको जगजाहेर नै छ । झण्डै दुई तिहाईको बहुमत भएको सरकार लामो समय पछि देशले पाएको भन्दै देशमा खुसी नै छाएको थियो । विकास निर्माणको कामले गति लिने, राजनितिक अस्थिरता नहुने भन्दै राजनितिक दलहरु बिच पनि खासै मतभेद देखिएको थिएन् ।
संविधानमै व्यवस्था नभएपनि आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित राजनिति गर्न खोज्दा दुई दुई पटक प्रतिनिधी सभा विघटन समेत भयो । अहिले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएपनि उनले चल्न दिएका छैनन् । महत्वपूर्ण कानूनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । देशलाई बन्धक बनाएर राजनीति गरिरहेको ओली गुटले संघीय संसद सचिवालयबाट लिने भक्ता तथा अन्य सुविधा भने नियमित रुपमा नै लिइरहेको छ
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आफैले मारेको संसदमा सबैभन्दा पहिले ओली गुटका सांसदहरु मेरो भक्ता के भयो ? यो महिना कति आउने भया ? भन्दै हरेक दिन जसो पुग्ने गरेका छन् । ओलीका लागि काम गर्ने संसद सचिवालयका सचिव रहेका राजेन्द्र फुयालले उनीहरुलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
तलब भक्ता त छाड्नुहुन्न नी हजुर भन्दै फुयालले फोन गरी गरी एमालेका सांसदहरुलाई बोलाउने गरेका छन् । उनले सचिवालयमा भएका नभएका सबै कुराको पोल समेत सुवास नेम्वाङ र खड्ग ओलीलाई सुनाउने गरेको सचिवालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । सचिवालयका अनुसार संसद चल्न नदिएपनि राज्यकोषबाट ५८ करोड ९८ लाख १२ हजार ४२ पैसा बराबरको खर्च भएको छ ।
सांसदको तलब भक्ता, घरभाडा, घर जाने आउने खर्च समेत सचिवालयले नै दिइरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै तलबमा २१ करोड ६९ लाख ६८ हजार ८५ पैसा खर्च भएको छ । यस्तै, बैठक तथा यातायात खर्चमा ४ करोड ११ लाख १८ हजार बराबरको खर्च भएको छ । यस्ते आवतजावतमा मात्रै १ करोड १२ लाख ६४ हजार बराबरको बजेट खर्च भएको छ ।
यस्तै घर भाडा वापत मात्रै ५ करोड ४२ हजार ६२ हजार बराबरको रकम सांसदहरुले लगेका छन् । पैसा त चाहियो नी होइन भन्दै एमालेका गोकूल बाँस्कोटा, कृष्णप्रसाद दाहालहरु सबैभन्दा पहिले सचिवालयमा पुग्ने गरेका छन् । संसद चल्न दिनुहुन्न, भक्ता र तलब भने छाड्नु हुन्न भन्दै बास्कोटाहरु ग्याङ नै बनाएका आएका थिए । अति नै गरेपछि हामीले भुक्तानी गरिदियौ, सचिवालयको लेखा शाखाका एक उपसचिवले भने । ती उपसचिवका अनुसार अन्य दलका सांसदले तलब भक्तामा चासो नराखेको भएपनि एमालेका अधिकांश सांसद महिना मर्न १० दिन बाँकी हुँदै सचिवालयमा जाने, कर्मचारीलाई धम्क्याउने, थर्काउने गरिरहेका छन् ।
यस्तै, बैठकमा अवरोध गर्ने तर हाजिरी गरेर एक हजार बैठक भक्ता र एक हजार बराबरको गाडी भाडा लिन भने एमालेका सांसद नै अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । नैतिकता नै नभएपछि कसको के लाग्दो रहेछ र ? सचिवालयका ती कर्मचारीले भने ।